म अध्यक्ष नउठन पनि सक्छु-ओली - Sankalpa Khabar
म अध्यक्ष नउठन पनि सक्छु-ओली
७ मंसिर १९:४८
काठमाण्डाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दसाैं महाधिवेशनमा उठने वा नउठने अझै तय नगरेकाे वताएका छन। महाधिवेशनका सन्दर्भमा मंगलवार सम्पादकहरूसँग छलफल गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्ताे वताएका हुन।
तपाईंलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने स्थितिमा केही चुनौती आएको हो ? भन्ने प्रश्न उनलाइ गरिएकाे थियाे।उनले भने -एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यसमा कुनै प्रकारको जोरजुलुम छैन । म उठ्ने–नउठ्ने टुङ्गो गरेको छैन । त्यसैले मलाई अध्यक्षमा छोड्न वा चुनौती दिन पाइन्छ । अरुलाई नउठ्न दबाब दिन्न । म अध्यक्ष भएमा पार्टीमा सबैलाई समान व्यवहार गर्छु ।
उनले उपाध्यक्ष डा. भीम रावलले अध्यक्षमा उठ्छु भनेर आफूलाई चुनौती नदिएको वताए । रावलले बरु आफूप्रति आदर, सम्मान, दिएकाे उनकाे भनाइ थियाे ।
अध्यक्ष ओलीले दशौँ महाधिवेशनले एमाले फुट्यो, कमजोर भयो भन्ने भ्रमलाई चिर्ने र पार्टीलाई शुद्धीकरण गर्दै एउटै लयमा अगाडि बढाएर मुलुकको समृद्धिका लागि पुनःनेतृत्व गर्न सक्ने शक्ति आर्जन गराउने बताए । यहि कार्यक्रममा पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईले एमालेकाे उदघाटन सत्रमा पाँच लाखको सहभागिता हुने वताए । मङ्सिर १० गते चितवनको नारायणी नदी किनारमा महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दा ७२ जना कलाकारको सामूहिक धूनबाट राष्ट्रिय गान बजाइने पनि उनले जानकारी दिए ।
महाधिवेशनको बन्दसत्र चितवनको सौराहामा हुनेछ । महाधिवेशनमा मनोनीतसहित दुई हजार २०० प्रतिनिधि हुनेछन् । उद्घाटन सत्रका लागि पाँच हजार स्वयंसेवक परिचालन गरिने भट्टराईले बताए । महाधिवेशनमा सयवटा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान हुनेछ ।
प्रशासनद्वारा स्थानीय तहमा बारअनुसारको सेवा
४ माघ १२:५१
३ माघ १०:४९
बार्सिलोनालाई हराउँदै रियल फाइनलमा
२९ पुष ०८:०८
१ माघ १२:५४
३० पुष १०:२९
२९ पुष १६:००